Hardware Wallet | Klever ezezimali
I-crypto yakho ikhuselekile kwi-a Klever Way
Klever I-Wallet ye-Hardware ikuvumela ukuba ugcine ngokukhuselekileyo, uthenge, utshintshiselwano, kwaye ukhulise i-asethi yakho ye-crypto.
Klever Usetyenziso lweWallet
Ifikeleleka kuphela ngendlela ekhuselekileyo, esebenziseka lula, kwaye evunyiweyo Klever Uqhagamshelwano lwabucala lweWallet app.
Khusela & ngokukhawuleza
Isekethe edibeneyo yodidi oluphezulu ibambe isitshixo sabucala esisodwa sokwenza imisebenzi ye-cryptographic.
Dinga uncedo? Klever ineyona nkonzo yabathengi ibalaseleyo kwihlabathi liphela le-crypto.
Bamba & Ulawule ii-asethi zeDijithali ngokuKhuselekileyo
I-wallet epheleleyo nekulula ukuyisebenzisa ukugcina nokulawula ii-cryptocurrencies zakho ozithandayo kwindawo ebandayo.
Gcina, ulawule, kwaye uthengise iimali zakho ezibandayo zedijithali ngeBluetooth okanye uqhagamshelo lwe-USBC ngaphakathi kwi-app!
Kwimizuzu nje embalwa, isipaji sakho sehardware sikulungele ukusetyenziswa.
* Iibhloko ezingenamkhawulo kunye nomthamo omkhulu.
Ukhuseleko oluqinisekisiweyo CC-EAL5+
Isitshixo sakho sabucala sikhuselekile kwihardware eqinisekisiweyo.
Iqhosha labucala elingaxhunyiwe kwi-intanethi
Qhagamshela isitshixo sakho sabucala kuphela xa kufuneka.
Ukusebenzisa i-USB Type-C isidibanisi, Klever I-Hardware Wallet iqhagamshela kwi Klever I-Wallet kwaye ikuvumela ukuba uqinisekise ukuthengiselana nge-crypto ngokucofa iqhosha.
Unxibelelwano lweBluetooth 5.2
The Klever I-Hardware Wallet inokudityaniswa ngokukhuselekileyo ne Klever Usetyenziso lweWallet usebenzisa iBluetooth 5.2.
Zeziphi iibhloko ezixhaswayo ngoku?
Zonke ii-blockchains ziyafumaneka Klever I-Wallet 4 iya kuhambelana nayo Klever Isikhangeli seHardware
Idumile Ngaphezulu kwe-10,000+ yeCryptocurrencies kunye neempawu
UKUTHENGISWA NGAPHAMBI KOMTHETHO
Ukuthengiswa kwangaphambili sele kuthengisiwe
Ukuba uyigcwalise ngokupheleleyo ifom yokuthengisa kwangaphambili, nceda ulinde ukuba siqhagamshelane nawe kungekudala ukuze ugqibe ukuthenga kwakho.